नेपाल आज | जुन मन्त्रालय पाए पनि लालबाबुले मच्चाउने भए हंगामा ! यस्ता छन् कामका सूची (भिडियोसहित)
जुन मन्त्रालय पाए पनि लालबाबुले मच्चाउने भए हंगामा ! यस्ता छन् कामका सूची (भिडियोसहित)
बिहिबार, १३ पुष २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित व्यवहारमा सरल तर नीतिमा कठोर नेताका रुपमा चिनिन्छन् । साइकल र ट्याम्पोमा यात्रा गरेका दृश्यदेखि राष्ट्रियताको पक्षमा उनले लिने अडानले समाजलाई उद्वेलित गरिरहन्छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक घराहाना कोइराला परिवारका उत्तराधिकारीका रुपमा चिनिएका शेखर कोइरालालाई पराजित गरेपछि लालबाबुको राजनीति थप लाल भएको छ ।
हस्तीलाई हराउन पण्डित कसरी सफल भए ? यो प्रश्नको उनी सरल उत्तर दिन्छन् । दुई पटक निर्वाचित भएर कोइरालाले जनताको पक्षमा माखो मार्न नसकेकै कारण आफू जनताको रोजाइमा परेको पण्डित बताउँछन् ।
चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा ‘लालबाबु पण्डित को हो ? चिन्दै चिन्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कोइरालाको आलोचना भयो । पण्डित व्यंग्यात्मक जवाफ फर्काउछन्, ‘म को हुँ भन्ने चिनाउन लड्डु लिएर भेट्न जान्छु ।’
कुन मन्त्रालय लिँदा के परिवर्तन ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रुपमा उनले ससामान्य चर्चा र लोकप्रियता बटुले । एमालेको सरकार गठन भएमा पण्डित मन्त्री बन्ने सम्भावना अधिक छ । पण्डितको रोजाइ कुन मन्त्रालय हो ? उनी आफ्नो चाहाना स्पष्ट भन्दैनन् तर कुन मन्त्रालयमा जाँदा के गर्छु भन्ने कुरा स्पष्ट बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘गृहमन्त्री भएँ भने, भएको ६ महिनाभित्र सिंगो नेपालको अपराधको लेभल ५० प्रतिशत घटाउँछु । स्वस्थ्यमन्त्री भएँ भने, सरकारी डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी हुने तर दिन चाहीँ निजी क्षेत्रमा बिताउने ? त्यो हुन दिन्नँ । सहज र सरल रुपमा सेवा प्रभावको व्यवस्था गर्दछु । भौतिक पूर्वधार पाएँ भने, एउटै सडक वर्षैपिच्छे सधैँ बनाएको बनाइ गरिराख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छु ।’
राष्ट्रपति कि गृहमन्त्री ?
राष्ट्रपति संवैधानिक पद भएकाले सो पदमा जान अहिले नै चाहाना नरहेको पण्डित बताउछन् । सक्रिय र कार्यकारी पदमा रहेर काम देखाउने उनको अठोट छ ।
सुशील कोइरालाको मृत्यु संकास्पद
ललबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री थिए सुशील कोइराला । कोइरालाले सहयोग नगरेको भए पण्डितको डिभि पिआरधारीलाई सरकारी र राजनीतिक नियुक्ति नदिने अभियान सफल हुँदैनथ्यो । रामशरण महत, विमलेन्द्र नीधि, मिनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद तथा एमालेकै बामदेव गौतमले समेत डिभी पिआर विरोधी अभियानलाई विफल बनाउने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । कोइरालाको सचिवालयदेखि पार्टीको मुख्य पदमा रहेका समेतसँग ग्रिनकार्ड वा पिआर थियो । प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिएको केही महिनामै कोइरालाको निधन भयो । पण्डित कोइरालाको निधनलाई सामान्य र स्वभाविक ठान्दैनन् । परिवार र पार्टीभित्रकैले कोइरालाको हत्या भएको हुन सक्ने उनको आंशका छ ।